Isizathu sokubonakala kweenwele ezimvu ngokuqhelekileyo kudla ukuguga ngokwemvelo. Nangona kunjalo, akuqhelekanga ukuba iinwele ezimpunga zivele ngaphambi kwexesha, ngenxa yexinzelelo okanye ulwabiwo. Kukho izidakamizwa ezizodwa eziphucula i-pigmentation kwaye zivimbela inkqubo yokuguqula. Kodwa oku kuya kunceda ukuxazulula ingxaki yokubamba iinwele kuphela ixesha elide. Ngoko ke, kukho iindlela ezigqithiseleyo zokugqithisa iinwele ezimnyama, kunye nenye yazo - iinwele ezidayayo.
Ukuze udayise iinwele zakho ngokukhawuleza kwaye ulungele ukuziphatha kakuhle uye kwi-hairdresser. Ukuba ukhetha indlela encinci, unako ukudaya iinwele zakho ekhaya kunye nezixhobo ezaneleyo kuyo nayiphi na ivenkile ekhethekileyo. Kodwa ukukhethwa kwezi zintetho sihloko kwinqaku ehlukile. Namhlanje siza kuthetha malunga nendlela yokusebenzisa iindlela zemveli ukubala imibala ebomvu.
AmaYiputa aseMandulo ayazi ngokubala imibala. KwiRoma yakudala, kwakunqwenela ukubala imibala enqabileyo, ngokuba kusetyenziswe iigobols kunye nejusi le-walnut. Kwakhona, amaRoma asendulo akwazi ukululalisa iinwele.
Zininzi iindlela ezidala kakhulu zokufumana oku okanye umbala weenwele ufikelele kwiintsuku zethu. Ngokomzekelo, ukucosa iigundes zeenwele ezimhlophe kufuneka zisebenzise ukumnika i-rhubarb, i-chamomile okanye i-decoction ye-ani scale. Ama-brunette kunye nama-brunettes i-recipe eyona nto iya kuba yindlela yokusebenzisa i-henna kunye ne-basma, ukudibanisa oko kukunceda ukufumana i-chestnut okanye umbala womnyama omnyama.
Ukutsala kweenwele ezimhlophe
Ukufumana ithoni elula ngakumbi, udinga i-100 g ye-chamomile okanye i-200 amagremu - ukuba ufuna ukuba mnyama. I-Chamomile ithulule i-0.5 ilitha yamanzi abilayo kwaye ugxininise imizuzu engama-30-40. Emva koko ukufakelwa kwamanzi kucocelwe kwaye ijusi yelisi yongezwa kuyo. Imveliso isetyenziswe imihla ngemihla kwiinwele ukufumana umphumo oyifunayo.
Ukuze ulungiselele umkhiqizo kwiifolo zee-anyanisi, kufuneka u-30-50 g wee-husk ezinjalo, okufuneka ubilise imizuzu eyi-15-20 kwi-200 g yamanzi. Umhluzi obangelwayo kufuneka uhlanjululwe kwaye usetyenziswe imihla ngemihla kwiinwele uze ube nombala.
Ukuze ukhanyise iinwele ezimvu nge-henna kunye ne-basma, inani elifunekayo le-powder lichongwe ubude beenwele. Ngoko ngeenwele ezimfutshane, malunga ne-25-50 g ye powder iya kufuneka, ngelixa ixesha elide liza kuthatha i-50-100 g. Ukufumana ithoni ethile kunye nobukhulu bombala, umlinganiselo we-henna kunye ne-basma uhlukile. Ngoko, u-1: 1 uza kunika iinwele i-chestnut tint, kumnyama, umlinganiselo we-henna kunye ne-basma kufuneka ube ngu-1: 2, kwaye u-2: 1-uya kunika umthunzi wethusi.
Ukulungiselela umxube we-henna powder kunye ne-basma kufuneka igalelwe kakuhle kwiiglasi okanye izitya ezithintekayo (ezihambelanayo). Ukuba konke oku kwenziwa kwintsimbi yesinyithi, imibala yeenwele ingaba ingalingani. Emva koko, izitya kunye nompu odibeneyo ufakwa kwisitya sokutshisa kwamanzi ashushu kunye nokutshisa, kodwa kungabi ngamanzi abilayo. Kulungile, ukuba endaweni yamanzi, i-powder iguqulwe ngewayini ebomvu okanye i-infusion yekhofi yendalo eqinile. Emva koko umgubo kufuneka ugalelwe iipuni okanye ukhuni ngaphambi kokufumana i-gruel engenasiphunga.
I-agent engumphumo isetyenziswe nge-cotton swab ehlanganiswe ngentonga yamatye ngokusebenzisa iingcingo ekuhambeni kwangaphambili. Ngaloo ndlela ukuhlamba inkunkuma yeswele okanye ezinye i-alkaline zokuhlamba iimveliso zilungile.
Kwiinkalo zokukhula kweenwele, kufuneka ukhethe uluhlu oluthile lweboya bekoton. I-Kashitsu isetyenziswe kuqala kwiindawo ezininzi zeenwele ezimvu, ukususela kwiingcambu zeenwele eziphakathi kwazo. Kule meko, ezo ndawo kufuneka zivezwe amaxesha amathathu. I-gruel eseleyo kwi-1 / 3-1 / 4 kufuneka ihlanjululwe ngamanzi ashushu kwaye isetyenziswe kwiziphelo zeenwele, isilula ngesandla. Emva koko, phezu kwalolu hlobo, kufuneka ubeke ioliyile yeoli kunye nokuguqa intloko yakho ngehayile okanye i-kerchief efudumeleyo.
Ukufumana ithoni elula ngakumbi, i-gruel kufuneka igcinwe imizuzu engama-20 ukuya kweye-30, kwaye unike iinwele zibe ngumthunzi omnyama -iyure nesiqingatha. Ekupheleni kwenkqubo, iinwele kufuneka zihlanjululwe ngamanzi afudumele. Ekubeni umbala wezinwele uqhubeka ngeeyure eziliqela ngaphantsi kwefuthe lomoya, emva kokuba uhlambuluko lwe-acid lube luphindaphindiwe.
Ekugqibeleni ndifuna ukuthetha ukuba ngamanye amawele abomvu angayihobisa umfazi, anike ubuso obunomthunzi, kwaye ubukeka bowesifazane - ubuchule obukhethekileyo. Nangona kunjalo, ukubonakala kweenwele ezimvu kwiindawo ezininzi zesini ezilungileyo kungabangela intlungu, ngoko ukufihla okungenani le tag tag yobudala kwabanye kufuneka baphenduke kwiinwele ezidayayo. Ukongezelela, kuya kunceda ukunika umfazi ukuzithemba nokukhusela ukuphuhliswa kwezakhiwo ezinxulumene nobudala bakhe.
Ukupheka kweMask ngeenwele ezintle
Ucoceko lomntu womfazi okhulelweyo
Iintlobo zophando lweplastiki ukwenzela utyando lwe-aesthetic kwi-gynecology
Iziphumo zokhuphiswano "Imifanekiso yenkwenkwezi"
I-physics ye-body: "izenzululwazi" zokuhlobisa uVgvst + uRrotey Temen
Iingxaki ngamalungu, ukuthintela kunye nonyango